Jwxo-shiil, Wuxuu Iibsan Jiray Kalyaha Dhalinyarada Ogaden! – Rasaasa News
Jwxo-shiil, Wuxuu Iibsan Jiray Kalyaha Dhalinyarada Ogaden!
Waxaa soo baxaya arimo xaqiiq ah oo ay sheegayaan dhalinyaradii Somalida Ogadeniya ee Eritrea lagu geeyey magaca ururka ONLF iyo arimo waxbarasho, oo haatan nabad qaatay.
Boqolaal dhalinyaro ah oo si khalad ah laggaga qaaday Jabuuti, Boosaaso iyo xeryaha qaxootiga ee Dhahaab,Kenya sanadihii 2006/7, oo qaarkood dagaal lagu qabtay qaarna ay qaateen nabadii ururka ONLF ayaa haatan ku sugan Jijiga. Waxaa dhintay ama meel ay jiraan aan war laga hayniin boqolaal kale oo maalin walba sawirkooda oo lagu soo dhajiyaa boggaga Jwxo-shiil, boggagaas oo qora in ay dagaal ku qaadeen ciidamada Ethiopia.
Dhalinyarada oo haatan dhaqan celin loogu samaynayo xero ay leedahay Jabhada ONLF ku leedahay Jijiga, halkaas oo ay warbixin xidhiidh ah ku siinayaan wariye ka socda ESTV.
Warbixinta murugada leh ee ay dhalinyaradu sheegayaan, ayaa kolka aad dhagaysato uu qalbigaagu si noqonayaa, cadho iyo nacayb hor lena aad u hqaadi Jwxo-shiil iyo kuwa kula shirkoobay gumaadka dhalinyarada Somalida Ogaden.
Dhibaatooyinka hore loo sheegay waxaa ka midahaa cimilo cadaab ah iyo in ay dhalinyaradu beeraha qodi jireen, qaar badana ay indhabeeleen.
Warbixinta cusub ee ay sheegeen dhalinyaradu waxaa ka mid ah, in ayna masuuliyiinta kooxdu arkiba jirin dhalinyarada ay Eritrea u loogeen.
Dhalinyaradu waxay sheegeen xumaan badan, waxaase ugu daraa in dhalinyarada Kalyahooda ay kooxdu ka iibin jirtay hantiilayaal Hindi ah oo u baahan in ay helaan kalyo caafimaad qaba.
Waxay dhalinyaradu sheegeen in ay qardayn jireen, iyaga xididka u saari jiray geedaha ka dibna aasi jiray kuna oodi jiray beerta geedihii ay ka gureen. Inta ay hawsha wadaan dhaliyaradu waxaa ilaalin jiray askarta Eritrea sida maxaabiista.
Ninka loo maleeyo in uu ka xunyahay dhibaatada ku haysata Eritrea,waxaa lagu figayn jiray meel heerkulkeedu gaadhsiisan yahay 60c iyo nooc figa oo ay yar tahay in ruuxa la mariyaa dib oo dambe laxaadkiisa ugu socdo.
Dhalinyaradu waxay sheegeen in ay banayn jireen meelo hawda oo la doonayo in laga dhigo jidad la maro, iyaga oo aan la siin wax cunto ah. Dhalinyarada ka dhaga adaygata in ay dhibaatadaas qabtaan, waxaa la marin jiray Booyad iyaga oo lagala bakhaylayo xabada in lagu dhufto ama laga yaabo in inta kale ay ka cadhoodaan.
Warxbinta ay dhalinyaradu sheegeen maah mid qoraal gaaban lagu dhamayn karo waxaanan isku dayeynaa in aan ka soo diyaarino warbixin dhamaystiran.
Ethiopian Chamber Elects Female President
Xeeladii Xaalmastuurka Kooxda Jwxo-shiil, oo Xaniban